12 Tempoly Fahiny Eran-tany | Save A Train
an-trano > Travel Europe > 12 Tempoly Fahiny Eran-tany
(Last Nohavaozina: 25/02/2022)
Raha afaka miteny ny vato tempoly fahiny, Niresaka momba ny sivilizasiona fahiny izy ireo, fanafihana, kolontsaina, ary fitiavana. ny 12 Ny ankamaroan'ny Tempoly Fahiny Maneran-tany dia voatahiry tsara sy mahatalanjona amin'ny hatsarana sy ny sarivongana. Avy amin'ny tempolin'i Farao any Ejipta ka hatramin'ny tempolin'ny Bodista sy Hindoa any Azia Atsimo-Atsinanana, vatosoa ara-tantara ireo tempoly tranainy ireo.
1. Tempoly Fahiny Eran-tany: Lapan'i Knossos
Toerana fivavahana sy ivon'ny fiainana ara-politika tamin'ny vanim-potoanan'ny Bronze, ny Lapan'i Knossos dia iray amin'ireo tempoly tranainy indrindra eran-tany. Ny tempolin'i Knossos no foiben'ny sivilizasiona Minoan tany Kreta. Ary, ny tempoly fahiny dia iray amin'ireo tempoly voatahiry tsara indrindra eran-tany.
Ny tempoly Knossos voalohany dia naorina tao 1900 BC amin'ny havoana, fa ny iray tamin’ireo horohorontany maro tany Kreta no nandrava azy. na izany aza, avy hatrany dia nisy tempoly hafa naorina sy rava tamin’ny fipoahan’ny volkano. Noho izany, ny tempoly Knossos mijoro ankehitriny dia ny 3RD tempoly avy 1375 BC. Knossos Temple dia iray amin'ireo toerana malaza geeks tantara miaraka amin'ny angano ao amin'ny relika.
Predating Stonehenge by 6,000 taona, ny vato Gobekli any atsimoatsinanan'i Torkia dia heverina fa ny sisa tavela tamin'ny tempoly voalohany teto an-tany.. ny 11,000 Toeram-pivavahana teo amin'ny havoana iray ny vato Gobekli Tepe.
na izany aza, tsy misy ny fikarohana momba ny fonenan'ny olombelona ao amin'ny faritra, fa ny toerana dia toerana iray amin'ny dian'ny mpihaza sy mpanangona maro mpifindrafindra monina. Noho izany, ny tempolin'i Gobekli Tepe dia natao ho fitoerana masina, misy dikany ara-pivavahana.
3. Tempoly Fahiny Eran-tany: Hagar Qim
Natao tamin'ny a 20 tone vato megalith eo afovoany, ny tempolin'i Hagar Qim dia iray amin'ireo tempoly manaitra indrindra maneran-tany. Noho izany, Hagar Qim koa dia tempoly mahazatra avy amin'ny Maltese Prehistoric.
Ny iray amin'ireo endri-javatra miavaka indrindra ao amin'ny tempolin'i Hagar Qim dia lavaka elliptika ao amin'ny iray amin'ireo efitrano roa.. Tamin'ny andro voalohan'ny fahavaratra, mandalo amin’io lavaka io ny tara-masoandro ary manazava vato iray. Afaka mitsidika an'i Hagar Qim ianao amin'ny dianao any Malta, ary mankafy ny iray amin'ireo 12 tempoly tranainy indrindra eran-tany.
4. Tempoly Fahiny Maneran-tany: Tempolin'i Seti
Tena voatahiry tsara, ny Tempolin'i Seti dia avy amin'ny tarana-mpanjaka fahasivy ambin'ny folo. Ny tempolin'i Seti dia ny famoronana an'i Seti sy ny zanany lahy Ramses II. Nanomboka ny famoronana ilay raim-pianakaviana, fa ny zanany kosa nahavita ny haingon-trano sy ny tokotany manodidina azy.
ankehitriny, afaka mitsidika ny Tempolin'i Seti ianao, eo amin'ny andro diany avy any Kairo. Rehefa any ianao dia tokony handinika ny graffiti Abydos eo amin'ny rindrin'ny tempoly.
5. Tempoly Fahiny Eran-tany: Tempoly Hypogeum
Ny tempoly ambanin'ny tany tranainy indrindra eran'izao tontolo izao dia ny tempolin'i Hypogeum izay voatahiry tsara indrindra any Malta. Ny tempoly miavaka dia 6,000 taona, 3 haavon'ny tempoly fahiny amin'ny efitra mifamatotra.
Ny tempoly Hypogeum no toeram-pivavahana sy fivavahana voalohany, fa tatỳ aoriana dia niova ho toeram-pandevenana ilay tempoly fahiny. Ny mpitsidika dia afaka mankafy ny sary hosodoko mena amin'ny rindrina, ny hany sary hoso-doko taloha tany amin'ireo nosy Malta. Ankoatry ny, afaka mahita ny zava-bita manokana hita ao amin'ny tempoly ao amin'ny Valletta Museum.
6. Tempolin'i Luxor
Rehefa mamakivaky ny efitranon'ny tempolin'i Luxor ianao, miverina amin'ny tantara an-jatony taona maro ianao. Ny dingana tsirairay dia mitondra anao hiverina amin'ny taonan'i Ramses II, ary ny fiainana ara-pivavahana tany Ejipta fahiny.
Ny Tempolin'i Luxor dia manana dikany lehibe amin'ny fivavahana Ejiptiana fahiny. Fanampin'izany, tao amin’ny tempolin’i Luxor no niainan’Andriamanitra Amon ny fahaterahana indray nandritra ny fanokanana an’i Farao isan-taona..
7. Tempoly Fahiny Eran-tany: Stonehenge
Ny faribolana vato lehibe dia iray amin'ireo mistery lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao. Stonehenge dia mirehareha ao Wiltshire, England. Mahasarika mpitsidika an-jatony hankafy azy io. Ireo manam-pahaizana momba ny tantara sy ny tontolon'ny arkeolojia dia mino fa ny druids dia nanangana an'i Stonehenge.
Mety ho nanana tanjona ara-pivavahana i Stonehenge tamin'ny andro taloha. Anisan’ny famantarana ny firafitry ny vato sy ny fisian’ny tsangambato manatrika ny fiposahan’ny masoandro. Na dia mbola tsy mazava aza ny fomba nitondrana ireo vato goavam-be ireo tamin'ity toerana manokana any Angletera ity, Stonehenge dia iray amin'ireo tempoly malaza indrindra hotsidihina maneran-tany.
8. Ny Tempolin'i Ggantija
Ny Ggantija fahiny any Malta dia miavaka amin'ny 12 tempoly tranainy indrindra maneran-tany. Izany dia noho ny zava-misy fa complexe misy tempoly roa. Ary, Ggantija Nahazo ny anarany ny tempoly noho ireo vato goavana nanamboatra azy ireo.
Ary, ankoatra ny fitsidihana ny iray amin’ireo tempoly lehibe indrindra maneran-tany, afaka mandeha amin'ny tsangambato vato tranainy indrindra eran-tany ianao.
9. Tempoly Fahiny Maneran-tany: Tempolin'i Amada
Malaza maneran-tany ny tempoly ejipsianina noho ny habeny, ary famolavolana. Ny tempoly any Ejipta dia fantatra amin'ny maha-tempoly tsara indrindra eran-tany. Noho ny hieroglyphs sy ny sary sokitra teo amin'ny rindrina, ny Tempolin'i Amada dia tsy miavaka amin'ny hatsaran-tarehy.
Ny kely, Misy sary sokitra tsara tarehy eo amin'ny rindrina anefa ny Tempolin'i Amada. Mizara zava-nitranga manan-danja teo amin'ny tantaran'i Ejipta toy ny fanafihan'ny Lybiana an'i Ejipta ny soratra. Noho izany, raha te hitsidika ny tempoly tranainy indrindra ao amin'ny Farihy Nasser ianao, ento ny kitaponao ary mankanesa any Nubia.
10. Tempolin'i Mundeshwari Devi, Bihar
Ny tempoly Hindu tranainy indrindra eran-tany, ao Kaimur ny tempolin'i Mundeshwari. KELY, fa mahavariana amin'ny sary sokitra vato, mariky ny Tompo Shiva sy Shakti ny tempoly. Ireo mpitsidika ny Tempolin'i Mundeshwari dia afaka mankafy ny sary sokitra mahavariana tamin'ny vanim-potoana Gupta sy ny fiainana taloha. 625 BC.
Ny tempoly tsara tarehy dia eo amin'ny havoanan'i Mundeshwari, izay nahitana vakoka manan-danja maro hafa. Raha variana ianao miaraka amin'ny tantaran'ny Hindoisma, tokony hitsidika ny Tempolin'i Mundeshwari ianao. Hahita bebe kokoa momba ny mariky ny Tompo Shiva sy Shakti miara-mipetraka amin'ny toerana iray manokana ianao.
11. Tempoly Fahiny Eran-tany: Borobudur Indonezia
Ny Tempolin'i Borobudur any Indonezia dia malaza amin'ny maha-tempoly Bodista lehibe indrindra eran-tany. Ankehitriny dia Bodista maro no mitsidika ny tempolin'i Borobudur amin'ny fivahiniana masina any amin'ny nosy Java.
Rehefa mitsidika ny Tempolin'i Borobudur ianao, dia ho talanjona ianao hahita ny 56,000 metatra toratelo vato volkano volondavenona izay mandrafitra ity tempoly bodista ity.
12. Tempolin'i Hatshepsut
Masina indrindra, ny tempolin'i Hatshepsut dia tamin'ny taonjato faha-18. Naorin’i Farao Hatshepsut teo amin’ny hantsan’i Deir El-Bahri ny tempoly, noho izany ny tavan’ny tempoly manoloana ny hantsana’ ny landscape dia iray amin'ireo manaitra indrindra eran-tany.
Ny tempoly fahiny dia tamin'ny vanim-potoanan'ny Fanjakana Vaovao, fa nandritra ny taona maro dia nanova ny tanjony ny tempoly ho lasa monasitera. Deir El-Bahri dia midika hoe “Monastera Avaratra”, ary misy trano fiangonana mihitsy aza ao anatin'ny tokotanin'ny Tempoly Hatshepsut.
Izahay ao Save A Train dia ho faly hanampy anao handamina fitsangatsanganana amin'ireny 12 Tempoly Fahiny Eran-tany.
Tianao ve ny hampiditra ny lahatsoratray amin'ny bilaogy "Temple 12 Indrindra Eran-tany" ao amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmg%2Fmost-ancient-temples-worldwide%2F – (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, ary azonao atao ny manova ny /fr ho /pl na /de sy fiteny maro hafa.
Dordogne Valley dia iray amin'ireo toerana 1o tsy hay hadinoina any Eoropa	AncientTemples	mostancienttemplesworldwide	Oldesttepmplesworldwide	Temples
Fiaran-dalamby Britain, Train Travel China, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Train Travel Holland, Train Travel Russia, Fiaran-dalamby Spain, Train Travel The Netherlands, Train Travel UK, Train Travel USA, Travel Europe